Ny Fanahy Masina: Miaina ao amintsika Izy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Ny Fanahy Masina: mitoetra ao amintsika Izy
Mahatsapa ve ianao indraindray fa tsy eo Andriamanitra amin'ny fiainanao? Afaka manova izany ho anao ny Fanahy Masina. Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia nanitrikitrika fa ny Kristiana niaina tamin'ny androny dia niaina ny fanatrehan'Andriamanitra velona. Fa eto amintsika ve izy anio? Raha eny dia ahoana no misy azy? Ny valiny dia izao, toy ny tamin'ny voalohany tamin'ny Kristiana voalohany, Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Miaina ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao amintsika ve isika? Raha tsy izany, ahoana no ahafahantsika manova izany?
Ao amin'ny bokiny "Fanatrehan'Andriamanitra Izay Manam-pahefana", Gordon D. Fee dia nitantara ny fanamarihan'ny mpianatra iray momba ny natiora sy ny asan'ny Fanahy Masina: "Andriamanitra Ray dia misy dikany tanteraka amiko. Azoko tsara ny Zanak'Andriamanitra, fa ho ahy ny Fanahy Masina dia volondavenona sy lava volo, "hoy ilay mpianatra. Ny fomba fijery tsy feno toy izany dia vokatry ny hoe ny Fanahy Masina dia - Fanahy. Araka ny nolazain'i Jesosy dia toy ny rivotra izy ka tsy tazana.
Tsy misy dian-tongotra
Hoy ny manam-pahaizana kristiana iray: “Tsy mamela dian-tongotra eo amin’ny fasika ny Fanahy Masina”. Koa satria tsy hitan’ny saintsika izy io, dia mora atao tsinontsinona sy mora diso hevitra. Etsy an-danin’izany, ny fahalalantsika an’i Jesosy Kristy dia miorina mafy kokoa. Satria olombelona ny Mpamonjy antsika, dia niara-nipetraka tamintsika tao amin’ny nofon’olombelona Andriamanitra, dia manana endrika ho antsika i Jesosy. Andriamanitra Zanaka koa dia nanome “tava” an’Andriamanitra Ray. Nanizingizina i Jesosy fa ireo izay nahita azy dia tokony hahita ny Ray koa: “Efa ela izay no efa nitoerako taminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany Aho, ry Filipo? Izay mahita ahy dia mahita ny Ray. Ary ahoana no ilazanao hoe: Asehoy anay ny Ray? (Jaona 14,9). Samy mipetraka ao amin’ny Kristianina ankehitriny izay feno ny Fanahy ny Ray sy ny Zanaka. Ao amin’ny Kristianina amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no misy azy ireo. Noho izany antony izany, dia azo antoka fa te hianatra bebe kokoa momba ny fanahy sy hiaina izany amin’ny fomba manokana isika. Amin’ny alalan’ny Fanahy no hiainan’ny mino ny maha akaiky an’Andriamanitra sy hahazoany hery hampiasa ny fitiavany.
Ho an’ny apostoly, ny Fanahy Masina no mpanoro hevitra na mpampionona. Izy dia olona antsoina hanampy amin’ny fotoan-tsarotra na fahalemena. “Toy izany koa ny fanahy manampy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay hivavahana, araka izay tokony ho izy, fa ny Fanahy no miditra ao anatintsika amin'ny fisentoana tsy azo tononina. » (Romana) 8,26).
Ireo izay tarihin’ny Fanahy Masina dia olon’Andriamanitra, hoy i Paoly. Ankoatra izany, dia zanakalahy sy zanakavavin’Andriamanitra izy ireo izay navela hiantso azy ho rainy. Afaka miaina ao anatin’ny fahafahana ara-panahy ny vahoakan’Andriamanitra rehefa feno ny Fanahy. Tsy andevozin’ny natioran’ny mpanota intsony ianao ary miaina fiainam-baovao feno fitaomam-panahy sy firaisana amin’Andriamanitra. «Fa hianareo tsy araka ny nofo, fa araka ny fanahy, satria ny Fanahin’Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa izay tsy manana ny Fanahin’i Kristy dia tsy azy » (Romana 8,9). Izany no fiovana lehibe ataon’ny Fanahy Masina amin’ny olona rehefa miova fo.
Ny fanirianao àry dia avy amin'izao tontolo izao ho an'Andriamanitra. Niresaka momba izany fiovana izany i Paoly: “Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, dia namonjy antsika Izy, tsy noho ny asa izay ho nataontsika tamin’ny fahamarinana, fa araka ny famindram-pony, tamin’ny fanasan’ny fahaterahana indray. ary ny fanavaozana ao amin’ny Fanahy Masina » (Titosy 3,4-5). Ny fisian’ny Fanahy Masina no tena zava-misy mamaritra ny fiovam-po. tsy misy saina; tsy misy fiovam-po; tsy misy fahaterahana indray ara-panahy. Satria Andriamanitra no Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ny Fanahin'i Kristy dia fomba hafa hifandraisana amin'ny Fanahy Masina. Etsy ankilany kosa, raha tena niova fo ny olona iray, dia hitoetra ao aminy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina i Kristy. An'Andriamanitra ny olona toy izany, satria nataony ho azy ny fanahiny.
Fiainana feno fanahy
Ahoana no ahafahantsika manana ny hery sy ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika ary hahafantatra fa mitoetra ao amintsika ny Fanahin'Andriamanitra? Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao, indrindra fa i Paul, dia nilaza fa ny fahaiza-manaony dia vokatry ny valin'ny olona iray amin'ny antso. Ny fangatahana dia ny fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, hiala amin'ny fomba fisainana taloha ary manomboka miaina amin'ny Fanahy.
Noho izany, tokony hampirisihina isika mba hotarihin’ny fanahy, handeha araka ny fanahy, ary hiaina araka ny fanahy. Ny fomba hanaovana izany dia voalaza ao amin'ny bokin'ny Testamenta Vaovao. Nanizingizina ny apostoly Paoly fa tsy maintsy havaozina ara-panahy sy fanahy ny Kristianina, ary tsy maintsy mitombo ny voa vaovao: “Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, ​​fahamarinana, fahalemem-panahy, fahadiovana; tsy misy lalàna manohitra izany rehetra izany » (Galatiana 5,22- iray).
Takatra amin'ny sahan'ny Testamenta Vaovao, ireo toetra ireo dia mihoatra ny hevitra na eritreritra tsara. Izy ireo dia maneho ny hery ara-panahy marina ao anatin'ny mpino omen'ny Fanahy Masina. Miandry ny hampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra io hery io.
Rehefa ampiharina ny toetra tsara dia lasa voankazo na porofo izy ireo fa miasa ao amintsika ny Fanahy Masina. Ny fomba hahazoana hery avy amin'ny Fanahy dia ny mangataka amin'Andriamanitra ny fanatrehan'ny Fanahy tsara toetra ary avy eo dia hitari-dalana anao.
Rehefa mitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny Fanahy, ny Fanahy koa dia manatanjaka ny fiainan'ny fiangonana sy ny andrim-panjakana misy azy amin'ny alàlan'ny mpino tsirairay izay miaina mifanaraka amin'ny Fanahy. Midika izany fa tokony hitandrina isika mba tsy hampifangaro ny lafiny fiainam-piangonana - toy ny programa, lanonana na finoana - miaraka amin'ny fiasan'ny Fanahy Masina mavitrika amin'ny fiainan'ny olona.
Ny fitiavana ny mpino
Ny porofo na kalitao lehibe indrindra amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao anatin'ny mpino dia ny fitiavana. Io toetra io dia mamaritra ny maha-izy azy Andriamanitra - ary mampahafantatra ireo mpino tarihin'ny Fanahy izy io. Io fitiavana io no notadiavin'ny apôstôly Paul sy ireo mpampianatra hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tian'izy ireo ho fantatra raha mihamatanjaka sy miova ny fiainan'ny Kristiana tsirairay avy amin'ny alàlan'ny fitiavana ny Fanahy Masina.
Ny fanomezam-pahasoavana, ny fanompoana ary ny fampianarana ara-panahy dia zava-dehibe amin'ny fiangonana. Fa ho an'i Paul kosa, ny fiasan'ny fitiavana ny Fanahy Masina ao anatin'ny mpino an'i Kristy no zava-dehibe kokoa.
Nilaza i Paoly fa raha afaka miteny amin’ny fiteny samihafa indrindra eran’izao tontolo izao izy, eny, na dia amin’ny fitenin’ny anjely aza, nefa tsy ampy fitiavana, dia ho lakolosy naneno ho azy na gongona miredareda (1. Korintiana 13,1).
Nanjary takany fa raha nanana aingam-panahy ara-paminaniana izy, nahafantatra ny zava-miafina rehetra any an-danitra, nanana ny fahalalana rehetra ary nanana finoana afaka mamindra tendrombohitra aza nefa tsy maintsy miaina tsy misy fitiavana, dia tsy hisy dikany (and.2). Na ny fivorian'ny fahalalana ara-Baiboly, ny orthodoxy teolojika, na ny finoana matanjaka aza, dia tsy afaka nanolo ny hery tamin'ny fitiavana ny Fanahy.
Afaka nilaza mihitsy aza i Paul hoe: Raha natolotro ny mahantra ny fananako rehetra ka maty tao anaty afo aho, nefa tsy nisy fitiavana ny fiainako dia tsy nahazo na inona na inona aho (and. 3). Na ny fanaovana asa tsara aza ho an'ny tenany dia tsy tokony hafangaro amin'ny fiasan'ny Fanahy Masina amin'ny fitiavana.
Zava-dehibe ho an'ny mpino ny fananana ny fisian'ny Fanahy Masina miasa ary hamaly ny Fanahy. Nanizingizina i Paul fa ny tena olon'Andriamanitra - tena Kristiana - dia ireo izay nohavaozina, ateraka indray ary novana mba hanome taratra ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Iray ihany ny fomba mety hitrangan'io fanovana io ao amintsika. Amin'ny alalàn'ny fiainana sy iainana amin'ny fitiavan'ny Fanahy Masina onenana. Andriamanitra Fanahy Masina dia fanatrehan'Andriamanitra manokana ao am-ponao sy ao an-tsainao.
nataon'i Paul Kroll!